गर्भावती अवस्थामा कस्ता कुराको सेवनले बच्चा स्वस्थ हुन्छ? - Mitho Khabar
गर्भावती अवस्थामा कस्ता कुराको सेवनले बच्चा स्वस्थ हुन्छ?
January 22, 2020 January 22, 2020 mithokhabarLeaveaComment on गर्भावती अवस्थामा कस्ता कुराको सेवनले बच्चा स्वस्थ हुन्छ?
काठमाडौं: स्वस्थ बच्चाको जन्म होस् भन्ने चाहना हरेक गर्भवतीलाई हुन्छ। यसका लागि गर्भावस्थाका दौरान पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक आहार लिनुपर्छ। गर्भको शिशुको विकास आमाको सही डाइट प्लानमा निर्भर हुन्छ।
आहार विशेषज्ञका अनुसार एक सामान्य महिलाका लागि डाइटमा १८०० क्यालोरी आवश्यक हुन्छ। तर गर्भावस्थाका दौरान यतिले मात्र पुग्दैन। फुड एण्ड न्युट्रिसन विशेषज्ञका अनुसार गर्भावस्थामा महिलालाई ३५० अतिरिक्त क्यालोरी आवश्यक हुन्छ। अर्थात् गर्भवतीले आफ्नो खानाबाट २३०० सम्म क्यालोरी प्राप्त गर्नुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा भिटामिन, खनिज, फाइबर, आइरन, जिंक र क्याल्सियम लिनुपर्छ।
गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनामा फोलिक एसिडयुक्त खाद्यपदार्थ सेवन गर्नुपर्छ। यसका साथै आइरनयुक्त पदार्थ बढी नै सेवन गर्नुपर्छ। यसले शिशुको राता रक्तकोष निर्माणमा मद्दत गर्छ। यो समयमा बिहान शरीर असामान्य महसुस हुने समस्या हुन्छ।
यसको समाधानका लागि भिटामिन बी-६ लिनुपर्छ। क्याफिनयुक्त चिज सेवन कम गर्नुपर्छ। सामान्यतः डाक्टरहरुले पहिलो तीन महिनामा दिने डाइट चार्ट आवश्यक पोषक तत्वलाई ध्यानमा राखेर बनाउछन्।
ब्रेकफास्टमा ब्राउन ब्रेड, एक कचौरा ओट्स, दाल, साबुदाना, दुध, दही, अण्डाको सेतो भाग, डाइजेस्टिभ बिस्कुट खान सकिन्छ। यस्तै, डिनरमा ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिड, भिटामिन डी, बिटा क्यारोटिन, क्याल्सियमयुक्त खानाहरु डाइट चार्टमा राख्न सकिन्छ। ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिडयुक्त खाद्यपदार्थ शिशुको मष्तिष्क विकासका लागि फाइदाजनक हुन्छ भने क्याल्सियम र भिटामिन डीले शिशुको दाँत र हड्डीको विकासमा भूमिका खेल्छन्। आइरन पुरै ९ महिना आवश्यक हुन्छ।
आइरनयुक्त खाद्यपदार्थसँगै कफी या चिया सेवन गर्नुहुन्न। किनकि, चिया र कफीमा भएको टेनिन नामक तत्वले आइरन शरीरमा शोसिन दिँदैन।
गर्भावस्थाका दौरान १० देखि १३ किलो तौल बढ्नुपर्छ। हरेक तीन महिनामा एक देखि दुई किलो तौल बढ्नु उपयुक्त मानिन्छ। विज्ञहरु गर्भवती महिलाले दिनहुँ हिडडुल गर्ने र गहिरो श्वास लिने अभ्यास गर्ने सल्लाह दिन्छन्।